September 16, 2021 – Shwe Myanmar
ပရိသတ်ကြီးရေ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ကျော်ထူးကတော့ သရုပ်ဆောင် လောကမှာ သာမက သ ဘင်ပညာဘက် မှာလည်း လူရွှင်တော် ကျော်ထူး အဖြစ်ပါ အောင်မြင်တဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ဦး ပဲဖြစ်ပါ တယ်နော် ။
အခုလို ကိုဗစ် ကာလမှာ ရိုက်ကူးရေးတွေ ရပ်နားတဲ့ အပေးမှာ လည်း အနုပညာရှင် ဇာတ်ပို့ ဇာတ် ရံတွေမှာ အတော်လေးကို စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ လှပါ တယ်။ ရိုက်ကူးရေးတွေ မရှိတော့ ဝင်ငွေတွေ ရပ်တန့်ချိန်မှာရုပ်ရှင် မင်းသား မင်းသမီးတွေက အစဟင်းရောင်း ထမင်းရောင်းကြ ရတဲ့ အထိ ပါပဲနော် ။
ဒီအထဲ မှာတော့ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေ ဖြစ်တဲ့ လူတွေ ဘဝက ပိုလို့ပင် ဆိုးရွား လှပါတယ် ။အပိုဝင်ငွေလေး ရမလားလို့ ကျော်ထူး တစ်ယောက် ကတော့ ဆန်တွေကို ဖောက်သည် ယူရောင်းဖို့ ကြိုးစားရင်း ကိုဗစ်ကာလ အခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် စိတ်မကောင်း စရာတွေနဲ့ ကြုံခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြ လာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။
အထူးသဖြင့် ဆန်ကို ရုပ်ရှင်မင်းသား မင်းသမီးတွေကို အားကိုးပြီး ရောင်းချပေမယ့် သူတို့ဆီ ဆန်နမူနာ လေးပေးပြီး ကောင်းမှ အားပေးကြ ပါလို့ တောင်းဆိုဖို့ သွားခဲ့ပေမယ့် သူ့ကို လူချင်းတွေ့ ဖို့နေနေသာသာ ခြံထဲတောင် အဝင်မခံပဲ အိမ်ဖော်နဲ့ပဲ တွေကခဲ့ရတဲ့ အပေါ်အတော်လေး စိတ်မကောင်း ဖြစ်နေ ပါတယ် ။
ရိုက်ကွင်းမှာ လုပ်ဖော် ကိုင်ဖက် တွေဖြစ်ပြီး ၊ ဇာတ် လမ်းတစ်ခု မှာလည်း အနုပညာ မောင်နှမတွေ ဖြစ်ခဲ့ပေမယ့် မင်းသား မင်းသမီးနဲ့ ဇာတ်ပို့ ဇာတ်ရံတွေရဲ့ လုပ်အားခဟာ အဆမတန် ကွာ ခြားနေတဲ့ အပြင်အခုလိုမျိုး လုပ်ရပ်တွေကြောင့်ကျော်ထူး တစ်ယောက် အတော်လေး စိတ်မကောင်းဖြစ်မိကြောင်း ပြောဆို ထားပါ တယ်။
ကျော်ထူးကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်ကြီး အနေနဲ့ရော ဘယ်လို မျိုးခံစားမိပါလဲ။ အခုလို အ နုပ ညာရှင် အချင်းချင်း အခက်အခဲ ဖြစ်နေ ချိန်မှာ ကူညီရမယ့် အစား ဒီလိုအဖြစ်မျိုးတွေဟာ ဖြစ်သင့်လားဆိုတာ ဝေဖန်ပေး ကြပါဦးနော်။Crd
ပရိသတျကွီးရေ ဟာသ သရုပျဆောငျ ကြျောထူးကတော့ သရုပျဆောငျ လောကမှာ သာမက သ ဘငျပညာဘကျ မှာလညျး လူရှငျတျော ကြျောထူး အဖွဈပါ အောငျမွငျတဲ့ အနုပညာရှငျ တဈဦး ပဲဖွဈပါ တယျနျော ။
အခုလို ကိုဗဈ ကာလမှာ ရိုကျကူးရေးတှေ ရပျနားတဲ့ အပေးမှာ လညျး အနုပညာရှငျ ဇာတျပို့ ဇာတျ ရံတှမှော အတျောလေးကို စားဝတျနရေေး ခကျခဲ လှပါ တယျ။ ရိုကျကူးရေးတှေ မရှိတော့ ဝငျငှတှေေ ရပျတနျ့ခြိနျမှာရုပျရှငျ မငျးသား မငျးသမီးတှကေ အစဟငျးရောငျး ထမငျးရောငျးကွ ရတဲ့ အထိ ပါပဲနျော ။
ဒီအထဲ မှာတော့ ဇာတျပို့ ဇာတျရံတှေ ဖွဈတဲ့ လူတှေ ဘဝက ပိုလို့ပငျ ဆိုးရှား လှပါတယျ ။အပိုဝငျငှလေေး ရမလားလို့ ကြျောထူး တဈယောကျ ကတော့ ဆနျတှကေို ဖောကျသညျ ယူရောငျးဖို့ ကွိုးစားရငျး ကိုဗဈကာလ အခကျအခဲကို ကြျောဖွတျဖို့ ကွိုးစားခဲ့ပမေယျ့ စိတျမကောငျး စရာတှနေဲ့ ကွုံခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးကို ပွောပွ လာတာပဲ ဖွဈပါတယျ ။
အထူးသဖွငျ့ ဆနျကို ရုပျရှငျမငျးသား မငျးသမီးတှကေို အားကိုးပွီး ရောငျးခပြမေယျ့ သူတို့ဆီ ဆနျနမူနာ လေးပေးပွီး ကောငျးမှ အားပေးကွ ပါလို့ တောငျးဆိုဖို့ သှားခဲ့ပမေယျ့ သူ့ကို လူခငျြးတှေ့ ဖို့နနေသောသာ ခွံထဲတောငျ အဝငျမခံပဲ အိမျဖျောနဲ့ပဲ တှကေခဲ့ရတဲ့ အပျေါအတျောလေး စိတျမကောငျး ဖွဈနေ ပါတယျ ။
ရိုကျကှငျးမှာ လုပျဖျော ကိုငျဖကျ တှဖွေဈပွီး ၊ ဇာတျ လမျးတဈခု မှာလညျး အနုပညာ မောငျနှမတှေ ဖွဈခဲ့ပမေယျ့ မငျးသား မငျးသမီးနဲ့ ဇာတျပို့ ဇာတျရံတှရေဲ့ လုပျအားခဟာ အဆမတနျ ကှာ ခွားနတေဲ့ အပွငျအခုလိုမြိုး လုပျရပျတှကွေောငျ့ကြျောထူး တဈယောကျ အတျောလေး စိတျမကောငျးဖွဈမိကွောငျး ပွောဆို ထားပါ တယျ။
ကြျောထူးကို အားပေးတဲ့ ပရိသတျကွီး အနနေဲ့ရော ဘယျလို မြိုးခံစားမိပါလဲ။ အခုလို အ နုပ ညာရှငျ အခငျြးခငျြး အခကျအခဲ ဖွဈနေ ခြိနျမှာ ကူညီရမယျ့ အစား ဒီလိုအဖွဈမြိုးတှဟော ဖွဈသငျ့လားဆိုတာ ဝဖေနျပေး ကွပါဦးနျော။Crd
အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိ အခုဖော်ပြမဲ့ Sultan အမည်ရှိနွားထီးတစ်ကောင်ဟာ ဝီစကီသောက်ရတာကို အတော်လေးကြိုက်ပါတယ်။၎င်းဟာ ညတိုင်း ဝီစကီတစ်ပုလင်းကို သောက်ပါတယ်။ Sultan က ဝီစကီရဲ့အရသာကို ဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာကိုတော့ ဘယ်သူမှမသိကြပါဘူး။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ Haryana ပြည်နယ်ရှိ Sultan ရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Naresh Kumarက Sultan ဟာ ဒေါ်လာ သုံးသန်းကျော်တန်ဖိုးရှိပြီး Sultan အား မနက်တိုင်း ၅ကီလိုမီတာအကွာအဝေးအထိ လမ်းလျှောက်ထွက်ခိုင်းပြီး ညရောက်တိုင်း ဝီစကီတစ်ပုလင်းတိုက်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ပါတယ်။
နွားတောင် ညတိုင်း ဝီစကီတစ်ပုလင်းသောက်ရတဲ့ဆိုတော့ ကောင်းလိုက်တဲ့ကံဇာတာပါဘဲဗျာ။ Sultanဟာ လက်တစ်လောလေးမှာဘဲ အတော်လေးကို နာမည်ကြီးလာခဲ့တာပါ။ ၎င်းဟာ ပြိုင်ပွဲ ၇ ခုမှာ ပထမဆုချည်းသာ ရရှိခဲ့ပြီး ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူက ၎င်းဟာ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ဈေးအကြီးဆုံးနှင့် အကြီးဆုံးသောနွားတစ်ကောင်ဖြစ်ကြောင်း အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Sultan ရဲ့အစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်ကတော့ သင့်ကို ပိုအံ့အားသင့်သွားစေမှာပါ။
၎င်းရဲ့တစ်နှစ်စာအစားအသောက်ကုန်ကျစရိတ်က သင်အိမ်တစ်လုံးဆောက်ပြီး အသာလေးနပ်နေလို့တောင်ရပါတယ်။Sultan ဟာပန်းသီး ၃၃ ပေါင်၊ မုန်လာဥ ၄၄ ပေါင်၊အသီးအစေ့ ၂၂ ပေါင် နှင့် မြက်စိမ်း၂၂ ပေါင်တို့ကို နေ့စဉ် စားသုံးပြီး နို့ဘူးပေါင်း ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလည်း သောက်ပါသေးတယ်။ Sultanရဲ့ အသုံးစရိတ်ကုန်ကျငွေကို ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ Nareshက နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ ၁၅၀,၀၀၀ ဝန်းကျင်ရှိတဲ့ ၎င်းရဲ့သုတ်ရည်တန်ဖိုးလောက် ကုန်ကျကြောင်း ခန့်မှန်းပြောဆိုထားပါတယ်။
Sultan ကို အနီးကပ် ဂရုစိုက်ထိန်းကျောင်းပေးရတဲ့ Lakhvir Singh က “ လူတွေက သူ့သုတ်ရည်ကို ၀ယ်ဖို့ နေရာအနှံ့ကနေလာကြတယ် ၊သူက အရက်ကို ညနေတိုင်း သောက်တယ် ၊ ကျွန်တော့်နွားတွေလည်း ကျန်းမာပါတယ် ဒါမဲ့ သူလိုတော့ အရက်မသောက်တတ်ဘူး” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Sultan လုပ်လိုက်လို့ နွားတွေအကုန်လုံး အရက်သောက်တာကိုအကျင့်တစ်ခုလို ဖြစ်မလာဖို့ဘဲ ဆုတောင်းရမှာပါ။ထို့အပြင် Sultanဟာ တစ်ရက်မှာ နှစ်ကြိမ်ရေချိုးပါသေးတယ်ဗျာ။Sultan ကတော့ သူ့ဘဝနဲ့သူကို သာယာနေတော့တာပါဘဲဗျာ။
အိန်ဒိယနိုငျငံ Haryana ပွညျနယျရှိ Sultan ရဲ့ပိုငျရှငျဖွဈသူ Naresh Kumarက Sultan ဟာ ဒျေါလာ သုံးသနျးကြျောတနျဖိုးရှိပွီး Sultan အား မနကျတိုငျး ၅ကီလိုမီတာအကှာအဝေးအထိ လမျးလြှောကျထှကျခိုငျးပွီး ညရောကျတိုငျး ဝီစကီတဈပုလငျးတိုကျကွောငျး ပွောပွခဲ့ပါတယျ။
နှားတောငျ ညတိုငျး ဝီစကီတဈပုလငျးသောကျရတဲ့ဆိုတော့ ကောငျးလိုကျတဲ့ကံဇာတာပါဘဲဗြာ။ Sultanဟာ လကျတဈလောလေးမှာဘဲ အတျောလေးကို နာမညျကွီးလာခဲ့တာပါ။ ၎င်းငျးဟာ ပွိုငျပှဲ ၇ ခုမှာ ပထမဆုခညျြးသာ ရရှိခဲ့ပွီး ပိုငျရှငျဖွဈသူက ၎င်းငျးဟာ တဈနိုငျငံလုံးမှာ စြေးအကွီးဆုံးနှငျ့ အကွီးဆုံးသောနှားတဈကောငျဖွဈကွောငျး အခိုငျအမာပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ Sultan ရဲ့အစားအသောကျကုနျကစြရိတျကတော့ သငျ့ကို ပိုအံ့အားသငျ့သှားစမှောပါ။
၎င်းငျးရဲ့တဈနှဈစာအစားအသောကျကုနျကစြရိတျက သငျအိမျတဈလုံးဆောကျပွီး အသာလေးနပျနလေို့တောငျရပါတယျ။Sultan ဟာပနျးသီး ၃၃ ပေါငျ၊ မုနျလာဥ ၄၄ ပေါငျ၊အသီးအစေ့ ၂၂ ပေါငျ နှငျ့ မွကျစိမျး၂၂ ပေါငျတို့ကို နစေ့ဉျ စားသုံးပွီး နို့ဘူးပေါငျး ဒါဇငျပေါငျးမြားစှာကိုလညျး သောကျပါသေးတယျ။ Sultanရဲ့ အသုံးစရိတျကုနျကငြှကေို ပိုငျရှငျဖွဈသူ Nareshက နှဈစဉျ ဒျေါလာ ၁၅၀,၀၀၀ ဝနျးကငျြရှိတဲ့ ၎င်းငျးရဲ့သုတျရညျတနျဖိုးလောကျ ကုနျကကြွောငျး ခနျ့မှနျးပွောဆိုထားပါတယျ။
Sultan ကို အနီးကပျ ဂရုစိုကျထိနျးကြောငျးပေးရတဲ့ Lakhvir Singh က “ လူတှကေ သူ့သုတျရညျကို ၀ယျဖို့ နရောအနှံ့ကနလောကွတယျ ၊သူက အရကျကို ညနတေိုငျး သောကျတယျ ၊ ကြှနျတျော့နှားတှလေညျး ကနျြးမာပါတယျ ဒါမဲ့ သူလိုတော့ အရကျမသောကျတတျဘူး” လို့ ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။
Sultan လုပျလိုကျလို့ နှားတှအေကုနျလုံး အရကျသောကျတာကိုအကငျြ့တဈခုလို ဖွဈမလာဖို့ဘဲ ဆုတောငျးရမှာပါ။ထို့အပွငျ Sultanဟာ တဈရကျမှာ နှဈကွိမျရခြေိုးပါသေးတယျဗြာ။Sultan ကတော့ သူ့ဘဝနဲ့သူကို သာယာနတေော့တာပါဘဲဗြာ။
သမီးလေးက အသက်မှ ၂၃ နှစ်ရှိသေး။ကိုယ်ဝန်ရလာတယ်။အမေလုပ်သူဒေါသအကြီးကြီး ထွက်ရပြီ။
“ကောင်မ အဲ့ဒါ ဘယ်နွားလက်ချက်လဲအခုဖုန်းဆက်စမ်း အဲ့ကောင်ကို”ကောင်မလေး ဖုန်းဆက်တယ်။နာရီဝက်လောက်ကြာတော့သူတို့အိမ်ရှေ့ကို Rolls-Royce တစ်စီးဆိုက်လာတယ်။
သားသားနားနားဝတ်စားထားတဲ့အသက်ကြီးကြီးလူတစ်ယောက်ကားပေါ်က ဆင်းလာတယ်။သူ ပြောတယ်။“မရည်ရွယ်ပဲ
ကိုယ်ဝန်ရသွားတာစိတ်မကောင်းပါဘူးဒါပေမယ့် ကျနော် သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့လည်း မဖြစ်နိုင်ဘူး
အဲ့ဒါကြောင့် သူ သမီးလေးမွေးခဲ့ရင်ကုန်တိုက်ကြီး ၂ ခု၊ ဥယဉ်အိမ်ရာ၂ ခုနဲ့ ဒေါ်လာ ၂ သန်း ပေးပါ့မယ်သားလေးမွေးရင်တော့
စက်ရုံ ၂ ရုံနဲ့ဒေါ်လာ ၅ သန်း ပေးပါ့မယ်ဒီလို ကျနော် တွေးထားပါတယ်
တကယ်လို့ ကလေး ပျက်ကျသွားရင်တော့ဘာလုပ်ပေးသင့်သလဲဆိုတာကျနော်မသိသေးဘူးဘာလုပ်သင့်လဲဆိုတာ ငါ့ညီမကြီး ပြောကြည့်လေ”
အမေလုပ်သူက ကမန်းကတန်း ပြန်ဖြေတယ်။“မတော်လို့ ကိုယ်ဝန်ပျက်ကျသွားရင်လည်းနောက်တစ်ကြိမ် ထပ်ကြိုးစားပေးပါလားဟင်”တဲ့ သေဇမ်းဒုတိယဘုရားသခင်က ငွေ တဲ့လား။
မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမှ ထိခိုက်နစ်နာစေလို မှု့မရှိပါ…။ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ဖတ်ရှု့ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် လွန်တာရှိရင် ဝန်တာမိပါ။
သမီးလေးက အသကျမှ ၂၃ နှဈရှိသေး။ကိုယျဝနျရလာတယျ။အမလေုပျသူဒေါသအကွီးကွီး ထှကျရပွီ။
“ကောငျမ အဲ့ဒါ ဘယျနှားလကျခကျြလဲအခုဖုနျးဆကျစမျး အဲ့ကောငျကို”ကောငျမလေး ဖုနျးဆကျတယျ။နာရီဝကျလောကျကွာတော့သူတို့အိမျရှကေို့ Rolls-Royce တဈစီးဆိုကျလာတယျ။
သားသားနားနားဝတျစားထားတဲ့အသကျကွီးကွီးလူတဈယောကျကားပျေါက ဆငျးလာတယျ။သူ ပွောတယျ။“မရညျရှယျပဲ
ကိုယျဝနျရသှားတာစိတျမကောငျးပါဘူးဒါပမေယျ့ ကနြျော သူ့ကို လကျထပျဖို့လညျး မဖွဈနိုငျဘူး
အဲ့ဒါကွောငျ့ သူ သမီးလေးမှေးခဲ့ရငျကုနျတိုကျကွီး ၂ ခု၊ ဥယဉျအိမျရာ၂ ခုနဲ့ ဒျေါလာ ၂ သနျး ပေးပါ့မယျသားလေးမှေးရငျတော့
စကျရုံ ၂ ရုံနဲ့ဒျေါလာ ၅ သနျး ပေးပါ့မယျဒီလို ကနြျော တှေးထားပါတယျ
တကယျလို့ ကလေး ပကျြကသြှားရငျတော့ဘာလုပျပေးသငျ့သလဲဆိုတာကနြျောမသိသေးဘူးဘာလုပျသငျ့လဲဆိုတာ ငါ့ညီမကွီး ပွောကွညျ့လေ”
အမလေုပျသူက ကမနျးကတနျး ပွနျဖွတေယျ။“မတျောလို့ ကိုယျဝနျပကျြကသြှားရငျလညျးနောကျတဈကွိမျ ထပျကွိုးစားပေးပါလားဟငျ”တဲ့ သဇေမျးဒုတိယဘုရားသခငျက ငှေ တဲ့လား။
မညျသူတဈဦးတဈယောကျကိုမှ ထိခိုကျနဈနာစလေို မှု့မရှိပါ…။ကြေးဇူးတငျပါတယျ ဖတျရှု့ပေးတဲ့အတှကျ ကြေးဇူးတငျပါတယျ လှနျတာရှိရငျ ဝနျတာမိပါ။
ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းမြို့မှ Nguyen Traiလမ်းဘေးတစ်နေရာတွင် ဈေးဆိုင်ချနေသော ဆိုင်ရှင်အမျိုးသား၏ အလုပ်ကြိုးစားပုံမှာ ဝယ်ယူသူကပင် အချိန်အတော်ကြာထိုင်စောင့်နေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ကောင်လေးတစ်ဦးဟာ ငါးကြော်စာချင်သည့်အတွက် အမျိုးသား၏ဆိုင်တွင် အပြေးသွားဝယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသား၏ဆိုင်ဟာ အကင်မျိုးစုံနှင့် ငါးကြော် အသားလုံးကြော်တို့ကို ရောင်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်
ကောင်လေးမှ ဈေးလာဝယ်သောအခါ ဆိုင်ရှင်မှ ဂိမ်းကစားနေသေးသည့်အတွက် ခဏစောင့်ပေးဖို့ပြောဆိုရင်း ဂိမ်းဆက်ဆော့နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ထိုအဖြစ်ကို ဈေးဝယ်သည့်ကောင်လေးက လိုင်းပေါ်တင်လိုက်ရာမှ အလွန်လူပြောများလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှင်အမျိုးသားကလည်း သူဟာ ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ကြောင့် ရောင်းချနေခြင်းမဟုတ်ဘဲ ဝါသနာကြောင့် ရောင်းချနေခြင်းသာဖြစ်သည်ဟု ဖြေရှင်းလာခဲ့ပါတယ်။
ဗီယကျနမျနိုငျငံ ဟိုခြီမငျးမွို့မှ Nguyen Traiလမျးဘေးတဈနရောတှငျ စြေးဆိုငျခနြသေော ဆိုငျရှငျအမြိုးသား၏ အလုပျကွိုးစားပုံမှာ ဝယျယူသူကပငျ အခြိနျအတျောကွာထိုငျစောငျ့နခေဲ့ရတာဖွဈပါတယျ။
ကောငျလေးတဈဦးဟာ ငါးကွျောစာခငျြသညျ့အတှကျ အမြိုးသား၏ဆိုငျတှငျ အပွေးသှားဝယျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ အမြိုးသား၏ဆိုငျဟာ အကငျမြိုးစုံနှငျ့ ငါးကွျော အသားလုံးကွျောတို့ကို ရောငျးခနြတောဖွဈပါတယျ
ကောငျလေးမှ စြေးလာဝယျသောအခါ ဆိုငျရှငျမှ ဂိမျးကစားနသေေးသညျ့အတှကျ ခဏစောငျ့ပေးဖို့ပွောဆိုရငျး ဂိမျးဆကျဆော့နခေဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ထိုအဖွဈကို စြေးဝယျသညျ့ကောငျလေးက လိုငျးပျေါတငျလိုကျရာမှ အလှနျလူပွောမြားလာခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဆိုငျရှငျအမြိုးသားကလညျး သူဟာ ငှကွေေးလိုအပျခကျြကွောငျ့ ရောငျးခနြခွေငျးမဟုတျဘဲ ဝါသနာကွောငျ့ ရောငျးခနြခွေငျးသာဖွဈသညျဟု ဖွရှေငျးလာခဲ့ပါတယျ။
လက်များနဲ့ ခြေများမပြည့်ဆုံပေမဲ့ အသက် ၂၂နှစ်အရွယ် မိတ်ကပ်ပညာရှင် Gabe Adams က TikTok နာမည်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ် ။ နောက်ပြီး သူဟာ သာမန်လူတွေထက် ဘာမဆိုလုပ်နိုင်တဲ့ သူပါ
“Gabe Adams” ကို ဘရာဇီးနိုင်ငံ၊ Sao Paulo မှာ မွေးဖွားခဲ့ပြီး ခြေလက်များမပါဘဲ မွေးဖွားလာခဲ့တာပါ
Hanhart Syndrome ရဲ့ ရလဒ်ကြောင့် သူဟာ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ အတွေးများ အပါအဝင် အခြားများစွာသော အရာတွေက လှုံ့ဆော်ပေးလေ့ရှိပါတယ်
“Gabe” က TikTok မှာ နာမည်ကျော်မိတ်ကပ်ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့မှာ လက်မရှိသော်လည်း Follower ၁.၇ သန်းကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မိတ်ကပ်အလှဖန်တီးနိုင်တဲ့ eyeshadow ကို သုံးနိုင်ကာ သာမန်လူတွေထက် blush ပို ကောင်းအောင် ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်
ဇွန်လ ၁၂ ရက်နေ့မှာ “Gabriel Adams” က သာယာတဲ့ လေထုတွေနဲ့ ချစ်သူ Adam Adam Wheatley ရဲ့ လက်ကိုတွဲပြီး နွေးထွေးတဲ့ မေတ္တာ ပြည့်စုံကို ရရှိခဲ့ပါတယ်
၎င်းတို့ နှစ်ဦးက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလမှာ Tinder မြို့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ဘဝကို အတူတကွနေထိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်
“Gabe Adams” ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင်အငွေ့အသက်ကို မြင်သူတိုင်း ပြုံးရွှင်စေပြီး ဒီလိုမျိုးစစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ကျွန်တော်တောင် ပိုင်ဆိုင်ချင်မိပါတယ် သတို့သားရော သတို့သမီးဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းနေခဲ့ပါတယ်
လကျမြားနဲ့ ခွမြေားမပွညျ့ဆုံပမေဲ့ အသကျ ၂၂နှဈအရှယျ မိတျကပျပညာရှငျ Gabe Adams က TikTok နာမညျကွီးတဈဦးဖွဈလာခဲ့ပါတယျ ။ နောကျပွီး သူဟာ သာမနျလူတှထေကျ ဘာမဆိုလုပျနိုငျတဲ့ သူပါ
“Gabe Adams” ကို ဘရာဇီးနိုငျငံ၊ Sao Paulo မှာ မှေးဖှားခဲ့ပွီး ခွလေကျမြားမပါဘဲ မှေးဖှားလာခဲ့တာပါ
Hanhart Syndrome ရဲ့ ရလဒျကွောငျ့ သူဟာ အပွုသဘောဆောငျတဲ့ အတှေးမြား အပါအဝငျ အခွားမြားစှာသော အရာတှကေ လှုံ့ဆျောပေးလရှေိ့ပါတယျ
“Gabe” က TikTok မှာ နာမညျကြျောမိတျကပျပညာရှငျတဈဦးဖွဈပွီး သူ့မှာ လကျမရှိသျောလညျး Follower ၁.၇ သနျးကြျောပိုငျဆိုငျထားပွီး မိတျကပျအလှဖနျတီးနိုငျတဲ့ eyeshadow ကို သုံးနိုငျကာ သာမနျလူတှထေကျ blush ပို ကောငျးအောငျ ပွုလုပျနိုငျခဲ့ပါတယျ
ဇှနျလ ၁၂ ရကျနမှေ့ာ “Gabriel Adams” က သာယာတဲ့ လထေုတှနေဲ့ ခဈြသူ Adam Adam Wheatley ရဲ့ လကျကိုတှဲပွီး နှေးထှေးတဲ့ မတ်ေတာ ပွညျ့စုံကို ရရှိခဲ့ပါတယျ
၎င်းငျးတို့ နှဈဦးက ၂၀၂၀ ခုနှဈ ဇနျနဝါရီလမှာ Tinder မွို့မှာ တှဆေုံ့ခဲ့ပွီး နောကျဆုံးမှာ သူတို့ရဲ့ ဘဝကို အတူတကှနထေိုငျရနျ ဆုံးဖွတျခဲ့ကွပါတယျ
“Gabe Adams” ရဲ့ မင်ျဂလာဆောငျအငှအေ့သကျကို မွငျသူတိုငျး ပွုံးရှငျစပွေီး ဒီလိုမြိုးစဈမှနျတဲ့ ခဈြခွငျးမတ်ေတာကို ကြှနျတျောတောငျ ပိုငျဆိုငျခငျြမိပါတယျ သတို့သားရော သတို့သမီးဘယျလောကျခဈြစရာကောငျးနခေဲ့ပါတယျ
“မွှတေကောငျကို ကိုယျမှာအပတျခံပွီး အိမျထဲ ချေါလာတဲ့ ခှေးကလေး နာမညျကွီးနေ”
“သူ့ကို ခဏလေးအပြင်ပေးထွက်လိုက်တာကို ပြန်လာတော့ အဖော်ပါခေါ်လာတယ်၊ ကိုယ်မှာ အနက်ရောင်၊ အညိုရောင်နဲ့ အဝါရောင် အစင်းတွေပါတဲ့မြွေတစ်ကောင်၊ အဲဒီမြွေမျိုးက အုန်းပင်ပေါ်မှာ နေပြီး နေ့ခင်းဘက် မြက်တောတွေမှာ ရှာဖွေစားသောက်တတ်တယ်၊ ထိတ်လန့်ရင် ပါးပြင်ထောင်ပြီး ပါးစပ်ဟတယ်၊ ပေါက်တတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ အဆိပ်မရှိဘူးဆိုလို့ ကြည့်နေတာ။
ကျနော့်ခွေးကလည်း မြွေကို တကယ်မကိုက်ဘဲ သာသာလေး ခဲတယ်၊ ဟိုမြွေကလည်း သူ့ကို တကယ်မပေါက်ဘဲ တကောင်နဲ့တကောင် ဆော့နေလိုက်တာ၊ ၁၀ မိနစ်လောက်လည်း ကြာရော မြွေလည်း မြက်တောထဲ ပြန်ပျောက်သွားရော၊ ကျနော့်ကောင်လည်း မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားတာပေါ့ ၊ လန့်နေလို့ ဗွီဒီယိုတော့ မရိုက်လိုက်ရဘူး” လို့ ခွေးပိုင်ရှင်က သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးတင်ထားတာပါ။
မှတ်ချက်တွေမှာတော့ ငါသာဆိုအဲဒီမြွေကို ရိုက်သတ်လိုက်ပြီ၊ အဆိပ်ရှိတဲ့မြွေသာဆို သွားပြီ၊ ခွေးကလည်း ဆော့စရာရှားလို့၊ သူတို့က အရင်ဘဝကွဲကွာနေတဲ့အဖော်ပြန်တွေ့ပြီ၊ ၂ ကောင်လုံး ချစ်စရာလေးပါ ………….. စသဖြင့် ‌ဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။
“သူ့ကို ခဏလေးအပွငျပေးထှကျလိုကျတာကို ပွနျလာတော့ အဖျောပါချေါလာတယျ၊ ကိုယျမှာ အနကျရောငျ၊ အညိုရောငျနဲ့ အဝါရောငျ အစငျးတှပေါတဲ့မွှတေဈကောငျ၊ အဲဒီမွှမြေိုးက အုနျးပငျပျေါမှာ နပွေီး နခေ့ငျးဘကျ မွကျတောတှမှော ရှာဖှစေားသောကျတတျတယျ၊ ထိတျလနျ့ရငျ ပါးပွငျထောငျပွီး ပါးစပျဟတယျ၊ ပေါကျတတျတယျ၊ ဒါပမေဲ့ အဆိပျမရှိဘူးဆိုလို့ ကွညျ့နတော။
ကနြေျာ့ခှေးကလညျး မွှကေို တကယျမကိုကျဘဲ သာသာလေး ခဲတယျ၊ ဟိုမွှကေလညျး သူ့ကို တကယျမပေါကျဘဲ တကောငျနဲ့တကောငျ ဆော့နလေိုကျတာ၊ ၁၀ မိနဈလောကျလညျး ကွာရော မွှလေညျး မွကျတောထဲ ပွနျပြောကျသှားရော၊ ကနြေျာ့ကောငျလညျး မောမောနဲ့ အိပျပြျောသှားတာပေါ့ ၊ လနျ့နလေို့ ဗှီဒီယိုတော့ မရိုကျလိုကျရဘူး” လို့ ခှေးပိုငျရှငျက သူ့ရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ရေးတငျထားတာပါ။
“ရုပျဆိုးလှနျးလို့လှောငျပွောငျနတေဲ့သူတှကေို သူဌေးဖွဈအောငျကွိုးစားပွီး ကောငျမလေးခြောခြောလေးကို တှဲပွလိုကျတဲ့ အမြိုးသား”
လူတွေတချို့ဟာရုပ်ဆိုးနေတဲ့လူတွေဆိုလှောက်ပြောင်ကြပြီး လူရာမသွင်းကြပေ။ ရုပ်မချောပေမယ့်ငွေဂုဏ်ပကာသနရှိနေရင် သင်ဟာဘာမှမပြုပြင်စရာမလိုဘူး လူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာသင်ဟာ လှနေပြီးသားဖြစ်စေပါတယ်။
ယခုတွင်လည်း ဗီယက်နမ်နိုင်ငံက အမျိုးသားတစ်ဦးဟာ ရုပ်အရမ်းဆိုးလွန်းနေသောကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်က သူ့ကိုနောက်ပြောင်ရုံသာမက အွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း သူ့ပုံယူပြီး အပျော်တမ်းစနောက်ခဲ့ပါတယ်။
စနောက်တဲ့သူတွေဟာဘာမှမဖြစ်ပေမယ့် စနောက်ခံရတဲ့ထိုအမျိုးသားဟာ သူငယ်ချင်းတွေကိုမျက်နှာမပြရဲအောင်အရှက်ရစေပါတယ်။ ထိုအမျိုးသားသည် အသက်ကြီးပေမယ့် ရုပ်ကကလေးရုပ်လိုပုံစံမပျောက်သေးပါဘူး ထို့ကြောင့် ဒီတသက်မိန်းမရမယ်လို့လည်း မထင်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ထိုအမျိုးသားဟာ သူ​၏ ဇာတိမြေသို့ပြန်သွားပြီး မခံချင်စိတ်နဲ့အလုပ်ကြိုးစားခဲ့ပြီး သူဌေးဖြစ်တဲ့အထိပင် စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်လာခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်တွင်သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေပေါ်လာပြီး ဇိမ်ခံကားနဲ့ ကောင်မလေးချောချောလေးခေါ်ကာ သူ့ကိုလှောင်ပြောင်ခဲ့သည့် သူ့သူငယ်ချင်းများထံသွားကာ ရက်ရက်စက်စက်ပြန်ချေခဲ့လိုက်ပါတယ်။
လူတှတေခြို့ဟာရုပျဆိုးနတေဲ့လူတှဆေိုလှောကျပွောငျကွပွီး လူရာမသှငျးကွပေ။ ရုပျမခြောပမေယျ့ငှဂေုဏျပကာသနရှိနရေငျ သငျဟာဘာမှမပွုပွငျစရာမလိုဘူး လူတှရေဲ့မကျြလုံးထဲမှာသငျဟာ လှနပွေီးသားဖွဈစပေါတယျ။
ယခုတှငျလညျး ဗီယကျနမျနိုငျငံက အမြိုးသားတဈဦးဟာ ရုပျအရမျးဆိုးလှနျးနသေောကွောငျ့ ပတျဝနျးကငျြက သူ့ကိုနောကျပွောငျရုံသာမက အှနျလိုငျးပျေါမှာလညျး သူ့ပုံယူပွီး အပြျောတမျးစနောကျခဲ့ပါတယျ။
စနောကျတဲ့သူတှဟောဘာမှမဖွဈပမေယျ့ စနောကျခံရတဲ့ထိုအမြိုးသားဟာ သူငယျခငျြးတှကေိုမကျြနှာမပွရဲအောငျအရှကျရစပေါတယျ။ ထိုအမြိုးသားသညျ အသကျကွီးပမေယျ့ ရုပျကကလေးရုပျလိုပုံစံမပြောကျသေးပါဘူး ထို့ကွောငျ့ ဒီတသကျမိနျးမရမယျလို့လညျး မထငျဘူးလို့ ဆိုပါတယျ။
ထိုအမြိုးသားဟာ သူ​၏ ဇာတိမွသေို့ပွနျသှားပွီး မခံခငျြစိတျနဲ့အလုပျကွိုးစားခဲ့ပွီး သူဌေးဖွဈတဲ့အထိပငျ စီးပှားရေးမှာအောငျမွငျလာခဲ့ပါတယျ။ ထိုအခြိနျတှငျသူ့ကိုကွိုကျတဲ့ မိနျးကလေးတှပေျေါလာပွီး ဇိမျခံကားနဲ့ ကောငျမလေးခြောခြောလေးချေါကာ သူ့ကိုလှောငျပွောငျခဲ့သညျ့ သူ့သူငယျခငျြးမြားထံသှားကာ ရကျရကျစကျစကျပွနျခခြေဲ့လိုကျပါတယျ။
“ဘုနျးကွီးကြောငျးအောကျမှာ နရေပွီး ကွှကျတှနေဲ့စားစရာမရှိ အခကျအခဲဖွဈနရှောတဲ့ အသကျ(၉၀)အဖှား”
ဘုန်းကြီးကျောင်းအောက်မှာ နေရပြီး ကြွက်တွေနဲ့စားစရာမရှိ အခက်အခဲဖြစ်နေရှာတဲ့ အသက်(၉၀)အဖွားကျေး…ကျေး…ကျေးဇူးပါ…မုန့်ဟင်းခါးလေး အသုပ်လို စားချင်တယ်။
အဖွား အသက် ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ ??အသက် (90)နှစ် ရှိပြီ ။ဘာစားချင်လဲ အဖွား ??ပိုက်ဆံ မရှိလို့ မစားနိုင်ရှာဘူးတဲ့ ။
ရော့…အဖွား 50,000 Ks…. ပိုက်ဆံရှိပြီလေ ဘာစားချင်လဲ မေးတော့….မုန့်ဟင်းခါးလေး စားချင်တယ်…မုန့်ဟင်းခါးကို အသုပ်လိုလေး စားချင်တယ်…အဲ့ဒါလေးဝယ်စားမယ်တကယ့်ကို စိတ်မကောင်းဘူးဗျာ…
တကိုယ်လုံး bed sore တွေ ဖြစ်နေတယ်ခြေထောက်က ပြန်ဆန့်လို့ မရတော့ဘူး။ နေရတာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တခုရဲ့ ကျောင်းအောက်မှာနေရတယ်…ကြွက်တွေ အမှိုက်တွေနဲ့ တကယ့်ကို အဆင်မပြေဘူး။
အဖွားရယ်…ကျနော် ထပ်လာခဲ့ပါအူံးမယ်…အဖွားတွက် အဖွား မွေးစားသမီးထံ… စောင် ခေါင်အုံး ခြင်ထောင်တွေထားပေးခဲ့တယ်…ဆန် ဆီ စားစရာတွေလဲ ပေးခဲ့တယ်…အဖွားကို အကုန်လဲပေးလိုက်ပါလို့ မှာခဲ့ပါတယ်။
အော…အသက်ရှည်စွာ နေထိုင်ရသောလဲ… ဘဝရဲ့ နေဝင်ချိန်မှာပင်ပန်းဆင်းရဲကြီးစွာ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေများစွာ ရှိနေပါလား။ဆင်းရဲနွမ်းပါး အဖိုးအဖွားများအတွက် အတူအကွ ပူးပေါင်း ကူညီလှူဒါန်းလိုပါက
KBZ Pay – 09795405717
Wave – 095408437 / 09795405717
CB – 0076 6005 0004 5012
ဘုနျးကွီးကြောငျးအောကျမှာ နရေပွီး ကွှကျတှနေဲ့စားစရာမရှိ အခကျအခဲဖွဈနရှောတဲ့ အသကျ(၉၀)အဖှားကြေး…ကြေး…ကြေးဇူးပါ…မုနျ့ဟငျးခါးလေး အသုပျလို စားခငျြတယျ။
အဖှား အသကျ ဘယျလောကျရှိပွီလဲ ??အသကျ (90)နှဈ ရှိပွီ ။ဘာစားခငျြလဲ အဖှား ??ပိုကျဆံ မရှိလို့ မစားနိုငျရှာဘူးတဲ့ ။
ရော့…အဖှား 50,000 Ks…. ပိုကျဆံရှိပွီလေ ဘာစားခငျြလဲ မေးတော့….မုနျ့ဟငျးခါးလေး စားခငျြတယျ…မုနျ့ဟငျးခါးကို အသုပျလိုလေး စားခငျြတယျ…အဲ့ဒါလေးဝယျစားမယျတကယျ့ကို စိတျမကောငျးဘူးဗြာ…
တကိုယျလုံး bed sore တှေ ဖွဈနတေယျခွထေောကျက ပွနျဆနျ့လို့ မရတော့ဘူး။ နရေတာ ဘုနျးကွီးကြောငျး တခုရဲ့ ကြောငျးအောကျမှာနရေတယျ…ကွှကျတှေ အမှိုကျတှနေဲ့ တကယျ့ကို အဆငျမပွဘေူး။
အဖှားရယျ…ကနြျော ထပျလာခဲ့ပါအူံးမယျ…အဖှားတှကျ အဖှား မှေးစားသမီးထံ… စောငျ ခေါငျအုံး ခွငျထောငျတှထေားပေးခဲ့တယျ…ဆနျ ဆီ စားစရာတှလေဲ ပေးခဲ့တယျ…အဖှားကို အကုနျလဲပေးလိုကျပါလို့ မှာခဲ့ပါတယျ။
အော…အသကျရှညျစှာ နထေိုငျရသောလဲ… ဘဝရဲ့ နဝေငျခြိနျမှာပငျပနျးဆငျးရဲကွီးစှာ ဖွတျသနျးနရေတဲ့ အဖိုးအဖှားတှမြေားစှာ ရှိနပေါလား။ဆငျးရဲနှမျးပါး အဖိုးအဖှားမြားအတှကျ အတူအကှ ပူးပေါငျး ကူညီလှူဒါနျးလိုပါက